မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရာဂါ၏ ရိုက်ခတ်မှု - အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း ကဏ္ဍရှိ အလုပ်သမားများ၏ ဝင်ငွေဆုံးရှုံးမှု ဆိုင်ရာလေ့လာ‌ချက်
မြန်မာ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍအပေါ် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါ၏ ရိုက်ခတ်မှု
ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါသည် ကမ္ဘာ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍကို ရိုက်ခတ်ခဲ့ပြီး ကုန်ထုတ် လုပ်ဖြန့်ဖြူးမှုကွင်းဆက်၏ ကဏ္ဍတိုင်းတွင် ယင်း၏ရိုက်ခတ်မှုဒဏ်ကို ခံစားခဲ့ကြရသည်မှာ အထင်အရှားပင်ဖြစ်ပါသည်။ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါသည် ကမ္ဘာ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍကို ရိုက်ခတ်ခဲ့ပြီး ကုန်ထုတ် လုပ်ဖြန့်ဖြူးမှုကွင်းဆက်၏ ကဏ္ဍတိုင်းတွင် ယင်း၏ရိုက်ခတ်မှုဒဏ်ကို ခံစားခဲ့ကြရသည်မှာ အထင်အရှားပင်ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတွင် အလုပ်အကိုင်များနှင့် အသက်မွေးမှုအတွက် အဓိကဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးသည့် မြန်မာ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍသည် ယင်းကပ်ရောဂါကို လွှဲရှောင်၍မရဘဲ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်းတွင် ကပ်ရောဂါကိုတုန့်ပြန်ရန်နှင့် ပြန်လည်နလန်ထူရန်အတွက် အရေးပါသည့်စိန်ခေါ် မှုများကို ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသည်။
လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် နိုင်ငံတကာ အလုပ်သမားရေးရာစံချိန်စံညွှန်းများ
ယခုအချိန်တွင် လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားစံချိန်စံညွှန်းများသည် ယခင်အချိန်ကာလများထက် ပို၍အရေးပါသည့်အခန်းကဏ္ဍတွင်ရှိနေပြီး ယင်းတို့နှင့်အညီ ဥပဒေ၊ မူဝါဒများနှင့် အလေ့အကျင့်များကို ရေးဆွဲဖော်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့် နိုင်ငံများ၏ COVID – 19 ကို တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်ရာ၌ အထောက်အကူပြုလျက်ရှိသည်။
ILO guide to International Labour Standards on Occupational Safety and Health
Now more than ever, internataionl labour standards on occupational safety and health (OSH) haveasignificant role in helping countries respond to COVID-19 through the development of law, politics and practices.
ဤလက်စွဲစာအုပ်သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရေးရာ အဖွဲ့၏ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် အကြံပြုတိုက်တွန်းချက်များကို အတည်ပြုရာနှင့် အသက်သွင်းရာတွင် ကျင့်သုံးသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ဖော်ပြထားပါသည်။
၁၀၉ ကြိမ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရေးရာ ညီလာခံ (၂၀၂၁ ခုနှစ်) - အတည်ပြုလက်ခံထားပြီးဆုံးဖြတ်ချက် (၅ က)
ကိုဗစ်-၁၉ ဘေးကျပ်နံကျပ်ကာလမှ လွတ်မြောက်ရေးအတွက်၊ အားလုံးပါဝင်၍ ရေရှည်တည် တံ့ခိုင်မြဲကာ အလိုက်သင့်တွန်းလှန်နိုင်စွမ်းရှိသော လူသားဗဟိုပြုပြန်လည် ထူထောင်ရေး အလုပ် များကို တစ်ကမ္ဘာလုံးကဆောင်ရွက်ကြပါရန် တောင်းဆိုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၇ ရက်)
Moving the Needle: Gender equality and decent work in Asia’s garment sector; Executive summary (In Khmer)
Making Decent WorkaReality for Domestic Workers: Organizing and empowering domestic workers through skills trainings, awareness raising and community advocacy
Making Decent WorkaReality for Domestic Workers, organizing and empowering domestic workers through skills trainings, awareness raising and community advocacy assesses the key achievements, challenges and lessons learnt of the ILO’s Developing International and Internal Labour Migration Governance (DIILM) project supported by Livelihoods and Food Security Fund (LIFT).
Philippines (21) Brunei Darussalam (16) Global (12) Bangladesh (6) India (5) Japan (4) Sri Lanka (4) Pakistan (4) Korea, Republic of (3) Fiji (3) Nepal (3) China (3) Solomon Islands (2) Mongolia (2) Vanuatu (2) Marshall Islands (1) Arab States (1) Timor-Leste, Dem. Rep. of (1) Cook Islands (1) Bhutan (1) Papua New Guinea (1) Micronesia (1) Samoa (1) New Zealand (1) Tuvalu (1) Australia (1) Kiribati (1) Tonga (1) Europe (1)